Booliska Puntland oo gacanta ku dhigay rag dhac u gaystay suuqa dahabka ee Boosaaso (Dhegeyso) – Radio Daljir
Booliska Puntland oo gacanta ku dhigay rag dhac u gaystay suuqa dahabka ee Boosaaso (Dhegeyso)
Oktoobar 22, 2013 6:20 b 0
Boosaaso, October 22, 2013 – Ciidamada amaanka ee Puntland ayaa gacanta ku dhigay rag hubaysan oo shalay dhac u gaystay dumarka ku ganacsada suuqada dahabka ee magaalada xeebta ah, kooxda ayaa dishay mid ka mid ah dumarka isla markaasna qaadatay fara badan.
Taliye xigeenka booliska gobolka Bari Axmed Muuse ayaa sheegay in ay ragaas ku daba jireen ilaa shalay, isla markaasna gacanta ku soo dhigeen saaka aroortii hore, iyagoo haatan loo gudbiyey dhanka xabsiga.
?Dadkaas waxay ahaayeen dad tuugo ah oo qolaysato ah, waan soo qabanay ilaa shalayna waan ku raad joognaa, labba nin ayey ahaayeen iyaga iyo hubkoodii intaba, wixii hanta ay dheceena waa lagu raad joogaa.? Taliye xigeenka booliska ee gobolka Bari Axmed Muuse.
Taliye xigeenka ayaa dalbaday in loo baahan yahay in lala shaqeeyo ciidamada si looga hortago khataraha noocaan oo kale ah, waxaa uu sheegay in Puntland ay dadaal dheer ugu jirto ilaalinta amniga shacabka isla markaasna aysan ogolaan doonin amni xumida.
DHEGEYSO:- ?Axmed Nuune oo warbixintan ka diyaariyey ragga la soo qabtay
Baahin: Salaasa, 22 Oct 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Xaliimo Sacdiya Cabdilaahi Cali~ Daljir ~ Garowe